सभामुख सापकोटाले ३ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको तथ्य बाहिरियो – Nepali Taja Khabar
सभामुख अग्नि सापकोटाले धरानको ३ सय ४८ विघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गराइएको तथ्य बाहिरीएको छ । सुनसरीको धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गा सापकोटा वनमन्त्री भएको बेला व्यक्तिको नाममा गराएको तथ्य बाहिरीएको हो ।
कोइरालाले भन्नुभयो, ‘तत्कालीन सचिवले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा दाखा गर्नुपर्छ भनेर राय दिएका थिए । तर, मन्त्री सापकोटाले व्यक्तिको नाममा गर्नू भनेर तोक लगाउनुभयो ।
आज ती व्यक्तिले दुईतिरको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले सो निर्णय भ्रष्टाचार हो भनेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपनि अख्तियारले खुट्टा कमाइरहेको छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्:- घरबाट निस्किन्दै गर्दा आमासँग अंगोलामा बेरिँदै यस्तो भनेकी रहिछन् भागीरथिले
घरको दैलोमा बस्दै बाटोतिर एको’होरो हेरी रहेकी यी आमा । जस्को ओँठमुख सबै सुकेका छन् । यिनलाई न दिनको भोक छ न त रातको निंद नै छ । छ त केवल आफ्नै जिन्दगीको सहनै नसक्ने पि’डा ।
यिनी हुन् स्कूलबाट अ’हिलेकी चर्चित दुख’द घटना’की पात्र भाग’रथीकी आमा । जस्को आखाँबाट बर्रर आँशु झरि रहेको छ तर पुच्छ्ने हेक्का भने छैन ।
पि’डामाथि पि’डा सहुन् पनि कसरी ? श्रीमानको मृत्यु भएको २ महिना पनि पुरा भएको थिएन । फेरी जवान र होन’हार छोरी गईन् अल्पआयुमै । यी एकल आ’माको काख र कोखबाट खोसिदिए पापीहरुले ।
सन्तानलाई सानो चो’ट मात्रै लाग्दा त त्यसको दुखाई आमाबुवालाई हुन्छ भने भागरथी त अकाल्मै यो संसार’बाटै आफ्नी आमाला’ई सदा’कालागी छाडेर गएकी छन् ।
छोरी अब यो सं’सारमा कहिल्यै नर्फ’कने गरी गएको खबरले यी आमाको मन दुखेको छ होला ? कति छ’टपटि’एको छ होला ? यो कुराको अनुभुति केवल उनैले मात्र गर्न सकेकी छन् । छोरी अझैं’पनि कतैबाट आमाभन्दै बो’लाउँदै आउँछे कि भन्ने उनला’ई कति लागेको हुँदो हो ।
तर अब त्यो कहाँ सम्भव छ र ? दैव पनि कति निष्ठुरी हुँदा रहेछन् भन्ने भनाई यतिबेला भागर’थीकी आमाको जीवन’मा लागु भई दिएको छ । बहीनी भागरथीलाई सम्झंदै रसाएका दाईका आखाँ’ले बहीनी गुमाउँदा उनको मनमा फु’टेको ज्वारभा’टालाई प्रष्ट देखाउँछ । बुवाको निधनपछि घरको जिम्मे’वारी उनीमाथी आई लागेको हुना’ले काम गर्न र आर्थिक कुरालाई माथि उठाउन उनी भारत गएका थिए ।
जब बहीनी भाग’रथीको बारेमा उनले थाहा पाए तब उनी भारतबाट घरमा आएका छन् । बहीनीलाई सम्झिं’दै उनी भन्छन्,‘म हिंड्ने बेला मैले बहीनीलाई भनेको थिएँ ।
बुवापनि हुनुहुन्न । मपनि इण्डिया कमाउन जाँदैछुु । आमाको र आफ्नो ख्या’ल राख्नु र रा’म्रोसंग पढ्नु ।’
बहीनी’संग भएको यही सम्बाद’लाई सम्झिंदै भक्का’निए भाथरथीका दाई । आमाको साहारा नै तिमी हौ भन्दै आमालाई बहीनी’को जिम्मा लागएका दाईले जब यो कुरा अर्काको देशमा काम गर्दै गर्दा थाहा पाए तब उनीमाथि के बिते’को थियो होला त्यो कसैले मह’सुस सम्म गर्न सक्दैन । भिडि योसहित
प्रचण्ड पत्नी सीताको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक : छोरी गंगाले पोष्ट गरिन् भावुक तस्वीर